Njengoba uphenya ezinkundleni zokuxhumana noma amawebhusayithi, ngokuvamile uzofika kweminye yemifanekiso yolwazi eklanywe kahle enikeza ukubuka konke kwesihloko noma ehlukanisa amathani edatha ibe yisithombe esihle, esisodwa, esishunyekiwe esihlokweni. Iqiniso liwukuthi… abalandeli, ababukeli, nabafundi bayabathanda. Incazelo ye-infographic iwukuthi...
I-Infographics iwukumelwa okubonakalayo okuyingcaca kolwazi, idatha, noma ulwazi oluhloselwe ukwethula ulwazi ngokushesha nangokucacile. Bangathuthukisa ukuqonda ngokusebenzisa izithombe ukuze bathuthukise ikhono lesistimu yokubuka yomuntu lokubona amaphethini namathrendi.
Kungani Kufanele Utshale I-Infographics?
I-Infographics ihluke kakhulu, kakhulu okudumile uma kukhulunywa ngokumaketha okuqukethwe, futhi unikeze inombolo yezinzuzo enkampanini eyabayo:
Imininingwane - Ngokungafani nokunye okuqukethwe, i-infographics yakhelwe futhi yakhelwe ukwabiwa. Inothi elilula eliya kokushicilelwe, izintatheli, abagqugquzeli, nabafundi abangalishumeka futhi babelane ngalo inqobo nje uma bexhumanisa emuva kusayithi lakho futhi bakunikeze ikhredithi kuwumkhuba ojwayelekile.
Ukuqonda - I-infographic eklanywe kahle igayeka kalula futhi iqondwe ngumfundi. Ithuba elihle lenkampani yakho ukuthi ihlukanise inqubo eyinkimbinkimbi noma isihloko futhi yenze kube lula ukuyiqonda… idinga umzamo omncane impela.
Ukwabelana - Ngenxa yokuthi iyifayela elilodwa, kulula ukulikopisha noma ukubhekisela kuyo yonke i-inthanethi. Lokhu kwenza kube lula ukwabelana… futhi i-infographic enhle ingahamba negciwane. Ithiphu elilodwa kulokhu - qiniseka ukuthi ucindezela i-infographic ukuze ingadingi ithani lomkhawulokudonsa ukuze ulande futhi ubuke.
Abathonya - Amasayithi afana Martech Zone okuwuthando olunamandla ukwabelana nge-infographics ngoba kusisindisa isikhathi esiningi ekuthuthukisweni kokuqukethwe.
Sesha Izinga - Njengoba amasayithi abelana futhi axhuma ku-infographic yakho, uyaqongelela ama-backlink abaluleke kakhulu esihlokweni… kuvame ukukhuphula izinga lakho lesihloko esidingidwa yi-infographic.
Ukuphindaphinda - I-Infographics imvamisa iqoqo lezinto ezahlukahlukene, ngakho-ke ukuhlukanisa i-infographic kunganikeza inqwaba yezinye izingcezu zokuqukethwe ukuze kwenziwe izethulo, amaphepha amhlophe, ishidi elilodwa, noma izibuyekezo zenkundla yezokuxhumana.
Izinyathelo Zokuthuthukisa I-Infographic
Sisebenza neklayenti njengamanje elinebhizinisi elisha, isizinda esisha, futhi sizama ukwakha ukuqwashisa, igunya, nama-backlinks. I-infographic iyisixazululo esiphelele salokhu, ngakho okwamanje iyathuthukiswa. Nansi inqubo yethu yokuthuthukisa i-infographics yeklayenti:
Ucwaningo Elingukhiye – Sihlonze inombolo yamagama angukhiye abengaqhudelani kakhulu ebesingathanda ukuwabeka ezingeni lesizindalwazi sawo.
ukuqondana - Sicwaninge isisekelo samakhasimende abo samanje ukuze siqinisekise ukuthi isihloko se-infographic bekungeso izithameli zabo ezingaba nentshisekelo kuso.
Ucwaningo - Sihlonze imithombo yocwaningo lwesibili (inkampani yangaphandle) esingayifaka phakathi kwe-infographic. Ucwaningo oluyisisekelo luhle, futhi, kodwa lungadinga isikhathi esiningi nesabelomali kunalokho ikhasimende ebelikhululekile ngakho.
Ukukhipha - Sihlonze abagqugquzeli namawebhusayithi ashicilele i-infographics esikhathini esidlule okungaba iziqondiso ezinhle kakhulu zokukhuthaza i-infographic yethu entsha.
Ukunikeza - Sihlanganisa okunikezwayo ngokwezifiso ku-infographic ukuze sikwazi ukulandelela yonke i-traffic nokuguqulwa okukhiqizwe yi-infographic.
copywriting - Sicele usizo lomuntu onelungelo lobunikazi owazi ngochwepheshe ngamafuphi, izihloko ezithinta ukunaka kanye namakhophi amafushane.
zokuphawula - Sithuthukise imidwebo yangempela sisebenzisa uphawu lwenkampani entsha ukuze siqhubekisele phambili ukuqwashisa ngomkhiqizo.
Izinguquko - Sisebenze ngokuphindaphindiwe izikhathi eziningana ukuze siqinisekise ukuthi ikhophi, ihluzo, kanye ne-infographic kunembile, akunaphutha, futhi iklayenti likhululekile ngakho.
Social Media - Siphule izici zesithombe ukuze inkampani ibe nochungechunge lwezibuyekezo zenkundla yezokuxhumana ukukhuthaza i-infographic.
usezingeni - Sithuthukise ikhasi lokushicilela, elilungiselelwe kakhulu ukuthi liseshwe ngekhophi ende ukuze siqinisekise ukuthi lifakwe ohlwini kahle futhi sengeza ukulandelela kwegama elingukhiye endaweni yethu yokusesha.
Ukwabelana - Sifake izinkinobho zokwabelana komphakathi ukuze abafundi babelane nge-infographic kumaphrofayili abo omphakathi.
Promotion - Izinkampani eziningi kakhulu ziphatha i-infographics njengento eyodwa futhi zenziwe ... ukuvuselela, ukushicilela kabusha, nokuphromotha kabusha i-infographic enhle njalo kuyisu elihle lokumaketha! Akudingeki ukuthi uqale ekuqaleni ngayo yonke i-infographic.
Nakuba isu le-infographic lingadinga ukutshalwa kwezimali okukhulu, imiphumela ibilokhu imihle kumakhasimende ethu ngakho-ke siyaqhubeka nokuwathuthukisa njengengxenye yokuqukethwe kukonke kanye namasu enkundla yezokuxhumana. Asizihlukanisi embonini ngokwenza nje ngokwenza ucwaningo oluningi futhi sisebenzela ukuthuthukisa i-infographic kahle, kodwa sibuyisela wonke amafayela abalulekile kuklayenti lethu ukuze siwasebenzise kwenye indawo emizamweni yawo yokumaketha.
Thola i-Quote ye-Infographic
Lena i-infographic yakudala evela I-Magnetism yekhasimende kodwa ibeka zonke izinzuzo ze-infographics kanye namasu ahambisana nawo. Iminyaka eyishumi kamuva futhi sisabelana nge-infographic, ukuqwashisa nge-ejensi yabo ukushayela, futhi sinikeza isixhumanisi esihle esibuyela kubo!
Tags: isu lokuqukethweuzibuthe wamakhasimendehighbridgeinfographicukwakheka kwe-infographicumklami we-infographicumdwebo wolwaziusezingeni elingukhiyeucwaningo lwegama elingukhiyeusezingeniokuqukethwe okuphindayosocial mediaukwabelana ngezokuxhumanaukwabelana komphakathiinani le-infographicokuqukethwe kwegciwaneukubukaokuqukethwe okubonisiweyini i-infographic